गोपनीयताको गन्तव्य कता ?- विचार - कान्तिपुर समाचार
गोपनीयताको गन्तव्य कता ?
शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई गोप्यताभित्र व्याख्या गर्ने–गराउने हो भने राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गरेर दीक्षान्त समारोह गराउने चलन नै बन्द गर्नुपर्‍यो ।
भाद्र ८, २०७५ लीला लुइँटेल
काठमाडौँ — गत सोमबार प्रतिनिधिसभामा ‘वैयक्तिक गोपनीयताबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सरकारले संसद्‌मा दर्ता गरेको समाचारले केही सोच्न बाध्य गरायो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र खोज्न र सार्वजनिक गर्न नपाइने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा गरिएको रहेछ ।
राज्यको ढुकुटीबाट तलब–सुविधा पाउने व्यक्तिको शैक्षिक प्रमाणपत्र र अन्य व्यक्तिगत विवरणसमेत गोप्य राख्ने यो कस्तो व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ?
सार्वजनिक भनेकै सर्वसाधारण जोसुकैले पनि चाहेको बेला जानकारी पाउनुपर्ने मेरो अल्पबुझाइ छ । होइन भने संविधानले व्यवस्था गरेको ‘सूचनाको हक’ एवं ‘सुसूचित हुने अधिकार’ भनेको के हो ? सार्वजनिक पद धारण गरेका कतिपय उच्चपदस्थ व्यक्तिका शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भेटिइरहेका बेला यस्तो विधेयक दर्ता गराउनुले सरकार स्वयंले नै यस्ता गलत क्रियाकलापलाई बढावा दिन प्रयास गरिरहेको संकेत गर्दैन र ?
लाभका पदमा रहेका राजनीतिक नेता, उच्चपदस्थ र सरकारी कर्मचारीले आफ्ना कमजोरी सार्वजनिक नहोस् भन्ने निहित स्वार्थले विधेयकमा यस्ता विवरणलाई गोप्य रहने सूचीमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो भने यो सोह्रैआना गलत दृष्टिकोण हो । यस्ता पदाधिकारीले खाने तलब–सुविधामा गरिब एवं निमुखा जनताको पसिना परेको हुन्छ । यस्ता कुरा जानकारी प्राप्त गर्नु जनताको अधिकारभित्रै पर्छ ।
व्यक्तिगत जीवनका गोप्यताभित्र शैक्षिक प्रमाणपत्र नपर्नुपर्ने हो । राज्यले जारी गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र कसरी गोप्य हुन्छ ? यदि शैक्षिक प्रमाणपत्रलाई गोप्यताभित्र व्याख्या गर्ने–गराउने हो भने राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गरेर दीक्षान्त समारोह गराउने चलन नै बन्द गर्नुपर्‍यो ।
होइन भने शैक्षिक प्रमाणपत्र भनेको त गौरवको विषय हो र जतिबेला जसलाई पनि देखाउन सकिने विषय हो । अहिले दर्ता गरिएको विधेयकमा यो व्यवस्था पास भएमा नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरूको मनोबल बढ्ने, राज्यका हरेक क्षेत्रमा तिनकै हालिमुहाली चल्ने अनि योग्य एवं सक्षम व्यक्तिहरूचाहिँ पलायन भएर डिप्रेसनमा जानसक्ने सम्भावनातर्फ किन कसैको पनि ध्यान नगएको ?
अर्काेतर्फ यो कानुन लागु भएपछि जेल सजाय भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिको आपराधिक पृष्ठभूमिसमेत सञ्चार माध्यममा प्रकाशन र प्रसारण गर्न पाइने छैन । यसको अर्थ भ्रष्ट आचरणका आसेपासे व्यक्तिलाई चोख्याउने र तिनलाई सार्वजनिक महत्त्वको उच्च पदमा पुन: नियुक्त गर्ने नियतले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो भन्ने बुझ्न कठिन हुँदैन । अनि पक्राउ परिसकेपछि पनि आदेशबिना घरमा खानतलासी गर्न नहुने व्यवस्थाले आदेशको प्रतीक्षामा यस्ता अपराधीले प्रमाणहरू नष्ट गर्न सक्नेतर्फ पनि सबैको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ ।
विधेयकमा जात, जाति, नागरिकता, जन्म, उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक उपाधि, ठेगाना, मतदाता परिचयपत्रलाई गोप्य रहने वैयक्तिक सूचनाका रूपमा राखिएको छ । यस व्यवस्थाले अब नाम पनि गोप्य राखिनुपर्छ भनेको हो ? सवारी चालक अनुमतिपत्र जस्ता कागजातलाई समेत गोप्य भनेर व्याख्या गर्दा सवारी चालक अनुमति पत्रको जाँच गर्दा ट्राफिक प्रहरीलाई पनि अप्ठ्यारोमा पार्ने स्थितिको सिर्जना हुनेतर्फ पनि सोच्नु आवश्यक छ ।
चरित्र सम्बन्धी गोपनीयता सुरक्षित गरिएको भनिएको विधेयकमा कुनै व्यक्तिको चरित्र एवं आचरणमा प्रश्न उठाउन नपाउने प्रावधान गरिएको छ । यस सन्दर्भमा रात बिताउनेगरी बसेको घर, अपार्टमेन्ट, होटल, रिसोर्ट, लज, पाहुना घर, शिविरको कोठामा प्रहरीले बिना प्रयोजन र लिखित सूचनाबिना खानतलासी गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ ।
यस प्रावधानले आपराधिक क्रियाकलापलाई बढावा दिने स्पष्टै देखिन्छ । यसले आपराधिक क्रियाकलापलाई राज्यबाटै सङ्गठित रूपमा मान्यता दिन लागिएको शङ्का गर्ने ठाउँ रहन्छ कि रहँदैन ? जनताको पसिना शोषण गरेर अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेका सार्वजनिक पदधारी अपराधीहरूले त्यस्ता कालो धन खर्च गर्ने र सिध्याउने ठाउँ भनेको नै होटल, लज, रिसोर्ट एवं क्यासिनो हुन् । त्यस्ता ठाउँमा खानतलासी गर्ने स्थितिलाई खुम्च्याएर प्रहरीलाई स्वतन्त्र हुन नदिने स्थितिको सिर्जना गरिएको अपराधीलाई उम्किन समय प्रशस्तै दिनकै लागि हो त ?
मञ्जुरी लिएर सूचना प्रयोग गर्दा पनि जुन प्रयोजनका लागि सूचना सङ्कलन वा प्राप्त गरेको हो, त्यही प्रयोजनमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । यसले एउटै व्यक्तिले गरेको आपराधिक सूचना सङ्कलनका लागि राज्यको जनशक्ति र ढुकुटीको दुरुपयोगका दृष्टिले यो कतिसम्म व्यावहारिक हुन्छ ? सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको उमेर, योग्यता, चरित्र, यौनिकता आदिका विषयमा प्रश्न उठेमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले मात्रै माग गरेमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएकाले अधिकार प्राप्त व्यक्ति भ्रष्टाचारमा मुछिने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन ?
त्यस्तै बैंक खाताको विवरण र कारोबार, चल–अचल सम्पत्तिको स्वामित्व र कागजातलाई पनि विधेयकले व्यक्तिगत गोपनीयताभित्र राखेर सार्वजनिक नगर्ने हो भने सार्वजनिक ओहदामा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने नाटक केका लागि ?
सरसर्ती हेर्दा उक्त विधेयकका माध्यमबाट किर्ते, जालसाजी तथा झुठको खेती गरेर अपराधलाई अझै कानुनी रूपमै बलियो पार्न खोजिएको भान हुन्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले कस्तो गाडी चढ्छ र कस्तो लुगा लगाउँछ भन्नेमात्रै जानकारी पाउनु नै सूचनाको हक अन्तर्गत पर्ने हो ? ‘सार्वजनिक पदधारी व्यक्तिका चरित्रबारे कसैले कुनै टिप्पणी गर्न हुँदैन’ भन्ने प्रावधानले उहिले राजतन्त्रका विरुद्धमा बोल्न नपाइने पञ्चायती भूत जागेर आएको अनुभव हुन्छ कि हुँदैन ? अझ भन्ने हो भने एक्काइसौँ शताब्दीको विद्युतीय सञ्चारको युगमा जनताको सुसूचित हुने अधिकारको व्याख्या यो विधेयकले कसरी गर्छ होला ?
प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:३७
स्वास्थ्यका लागि सुमधुर संगीत
विषाक्त, विकृत र नकारात्मक सन्देश दिने गीत–संगीतबाट कालान्तरमा नकारात्मक प्रवृत्ति विकास हुन्छ ।
भाद्र ८, २०७५ डा. धनरत्न शाक्य
काठमाडौँ — बिहानै कुनै गीत वा धुन सुने लामो समय त्यही मनमा आइरहन्छ । थाहै नपाइकन गुनगुनाइन्छ । पार्टी वा समारोहमा ठूलो आवाजमा गीत घन्किरहेको हुन्छ । सवारी साधनमा शृंखलाबद्ध बजिरहेका हुन्छन् । तपाईंले सुनिरहने, गुनगुनाइरहने गीतले पार्ने मनोसामाजिक प्रभावलाई कहिल्यै केलाउनुभएको छ ?
गीत–संगीत जनजीवनको अभिन्न अंश भएको छ । चाहे पनि नचाहे पनि हरेक घरमा श्रव्य र दृश्य रूपमा गीत भित्रिन्छन् । लोक, आधुनिक, पप, हेभिमेटल, र्‍यापजस्ता रूपमा मानव मनका भाव बोकेर गीत–संगीत रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट लगायतका माध्यमबाट घन्किन्छन् । बाल, किशोर, युवा, वयस्क वा वृद्ध सबै आआफ्नै जानी–नजानी गीत–संगीतमा डुबेकै छन् ।
गीत–संगीतले सर्जकलाई मानसिक तुष्टि, वृत्ति विकास, पहिचान दिन्छ । श्रोतालाई मनोरञ्जन, शान्ति, चेतना, मानसिक आहत प्रदान गर्छ । गीतमै समाज, संस्कृति र युगको चित्रण हुन्छ । सर्जकको समग्र मनस्थिति, स्वास्थ्य, चेत, विवेक स्तर, श्रोताको रुचि, मनोसामाजिक स्थिति, विश्व संगीत, समय र समाजको दिशा, रीति, प्रवृत्ति आदिबाट गीत–संगीत प्रभावित रहन्छ । गाउँ, सहर, सबैतिर सबै परिस्थितिमा बजाइने गरिन्छ, गीत–संगीत । यसको मानव मन, व्यवहार, प्रवृत्ति, स्वास्थ्य र समग्र समाजको दिशानिर्देशसम्ममा चेत अचेत रूपमा असर हुन्छ ।
गीत सुन्दै गाडी चलाउने, कारखानामा काम गर्ने, भान्छा वा घरगृहस्थ गर्ने गरिन्छ । आजभोलि बहुसंख्यक मोबाइल फोनमा इयरफोन जोडेर गीत सुन्दै हिँड्छन् । मानिसको नसा–नसामा गीत–संगीतको असर र प्रवृत्ति सल्बलाउने निश्चित छ । गीत–संगीत संवेदनशील विषय हो । विशाक्त, विकृत र नकारात्मक सन्देश दिने गीत–संगीतबाट भने कालान्तरमा नकारात्मक प्रवृत्ति विकास हुन्छ ।
विकृति फिँजाउनेहरू सर्जकका नाममा कलंक हुन् । खुसी, उत्साह, उपलव्धि, सफलता वा अवसरजस्ता सकारात्मक अनि दु:ख, निराशा, घृणा, धोका, अधोगति, विरह, विकृतिजस्ता नकारात्मक मानव मनस्थिति गीत–संगीतले समेटेका हुन्छन् । गीतमै आह्वान, समाज सुधार, राष्ट्रप्रेमको भावना लगायतका सन्देश हुन्छन् । चाडपर्व, चालचलन, संस्कृतिको चिनारी गीतमा हुन्छ । गीतमा समाजको चित्र र प्रवृत्ति उद्धृत हुन्छ ।
नेपाली समाज संस्कार, घरपरिवार, नातागोता र मानवीय सम्बन्धलाई महत्त्व दिन्छ । नेपाली गीतमा केटाकेटी, महिला–पुरुषको सम्बन्धले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । यसले अभिभावक, भ्रातृत्व र अरू सबैजसो सम्बन्धलाई ओझेलमा पारेको छ । पुस्तौं–पुस्ता र निरन्तरको अवलोकनबाट बालसुलभ मनमस्तिष्कमा यो प्रवृत्तिकै रूपमा स्थापित हुने जोखिम छ । एकलकाँटे, मतलबी र एकल परिवारको समाजमा यो प्रवृत्ति अझ शक्तिशाली रूपमा देखिँदैछ । अरू खालका मानवीय सम्बन्ध अपहेलित हुने प्रवृत्तिलाई नेपाली गीतले मलजल नगरुन् ।
नेपाली गीतमा नारी सौन्दर्य अत्यधिक र पुरुषार्थ कम चित्रित छ । नारीको सुन्दरता वर्णन, फेसन, मादकता र अश्लीलताको वकालतमा नेपाली गीतमा कुनै नियम, सीमा देखिँदैन । मानौं, लेख्न, प्रशंसा र बखान गर्नका लागि अरू सुन्दर र उल्लेखनीय गुण, चरित्र वा कुरा छैनन् । नारी सौन्दर्यजस्तै सत्य, सुन्दर र शाश्वत कुरा, गुण र प्रसंगले यथोचित स्थान पाए भोलिको पिढीमा सन्तुलित दृष्टिकोण विकास हुन्छ । मानव जीवन र समाजका लागि चर्चा हुनुपर्ने बैंस र शारीरिक सौन्दर्यमात्रै त पक्कै होइन होला ।
पिरतीको प्रसंगमा सभ्य–असभ्य, स्वस्थ–अस्वस्थ, उचित–अनुचित, सामान्य–असामान्य, साधारण–असाधारण, लौकिक–अलौकिक अनुरोध, प्रस्ताव, आह्वान धेरै गीतका मर्म हुने गर्छन् । अनुनय, धम्की वा तटस्थ रूपमा राखिने प्रस्तावका कुरा गीतमा अभिव्यक्त हुन्छन् । भौतिक सुखभोगदेखि भट्केको मानिस र आत्मालाई जीवन मार्गमा डोर्‍याउने दिव्य सल्लाह र अनुरोधसम्म अटेको हुन्छ, गीतमा ।
समाजमा हरेक खालका, क्षमता र प्रकृतिका मानिस हुन्छन् । बच्चा, किशोर लगायत मानसिक रूपले अपरिपक्व मानिसलाई यस्तो मर्मले वशिभूत तुल्याउन सक्छ । मायामा मान्छे अन्धो हुने भनिए पनि वास्तवमा हरपल कुनै कुरा अवलम्बन गर्नुअघि सोचविचार पुर्‍याउनुपर्छ । गर्नलाई केटाकेटी बीचमा प्रेममात्रै हो कि जीवन र समाजलाई सही मार्गमा डोर्‍याउन अरू पनि कुरा छन् ? संवेदनशील भएर गीत सिर्जना हुनुपर्छ ।
प्रेममा फस्दा, फसाउँदाका अनुभव, अतिशयोक्तिपूर्ण बेलिविस्तार र चित्रण भएका गीत कम छैनन् । मायाका नाममा आफ्नो मनसँग लहसिएको, हारेको र लाचारी, तृष्णा, आशक्तिका भाव गीतमा हुन्छन् । यसले कामको सिलसिलामा टाढिएर बसेका श्रीमान–श्रीमतीलाई दिग्भ्रमित त पार्दैन ? विछोड, विरह, असफलता, धोका गीत–संगीतको लोकप्रिय र सर्वाधिक हावी भएको प्रसंग र प्रवृत्ति हो । प्राय: सदावहार र लोकप्रिय गीतमा प्रेमका पीडापूर्ण नियति समेटिएको पाइन्छ । मानौं, उदासी नेपाली मनको जीर्ण प्रवृत्ति हो । मानव मन सन्तुलन गर्ने गीतहरू चाहिँदैनन् ? ममा सधैं कौतुहल हुन्छ ।
गुनासो, बदला, असन्टुष्टि, आरोप–प्रत्यारोप अर्काे नकारात्मक तर प्रवृत्तिगत मर्म देखिन्छ, नेपाली गीत–संगीतको । आवेश र आवेगमा होमिने अनि परिणाममा जलेपछि एकले अर्कोलाई दोष दिने, सराप्ने वा चुपचाप सहने वा आफैंलाई अस्वस्थ पीडामा डुबाउने आशय व्यापक रूपमा चित्रित गरिएको हुन्छ ।
सम्बन्धमा मर्यादा, विवेक, धैर्य र जटिलता रोकथामको सन्देशपूर्ण गीत–संगीत आवश्यक छ कि छैन ? असफलता, विछोडको परिस्थितिमा हतास, निराश, अन्धकार, सर्वनाश भएको अर्थमा आत्महत्या, मृत्युुसम्म रोज्ने आशयका विशाक्त र नामर्दिपन ओकल्ने गीत कम छैनन् । महिला–पुरुषको माया मानवीय जीवन, समाज र संवेदनाका अरू धेरै अंशमध्ये एक हो ।
अतिशयोक्तिपूर्ण रूपमा किन महत्त्व दिने ? अरू अंशलाई बिर्सेर जीवन, भविष्य र आत्मविश्वासै डगमगिने सन्देश गीतमा नदिँदा के होला ? मिलन र रोमाञ्चकता आजभोलि लोकप्रिय प्रसंग बन्दैछ । यसले श्रोतामा ऊर्जा र कौतुहलता थप्छ ।
डा. शाक्य स्नायु, दुव्र्यसन तथा मनोरोग विशेषज्ञ हुन् ।
प्रकाशित : भाद्र ८, २०७५ ०७:३६